Iindaba - Izilumkiso zokusebenzisa iingxowa zomoya
Izilumkiso zokusebenzisa iingxowa zomoya
Impembelelo yokukhusela i-cushionedibhegi ikholamu yomoyailungile ngokwenene, kodwa kukho kwakhona i-drawback, oko kukuthi, iveliswa kwifilimu yeplastiki, abantu abaninzi bayazi ukuba ifilimu yeplastiki inesiphene esihlatywa ngokulula kwaye sonakaliswe zizinto ezibukhali, ngoko ke isikhwama sekholomu yomoya sinalo bubi, Ukongeza, ukusebenza kwe-cushioning yekholomu yomoya kuxhomekeke kuxinzelelo lomoya ukwenza ukucotha.
Ukongezelela, ukusebenza kwe-cushioning yekholomu yomoya kuxhomekeke ekubunjweni kwe-cushioning layer yoxinzelelo lomoya ukukhusela iimpahla ezipakishweyo kumonakalo wangaphandle.Ngoko ke, ukuba isikhwama sekholomu yomoya sichatshazelwa yinto ebukhali efanayo, isikhwama siya konakala kwaye sivuze, kwaye asikwazi ukusetyenziswa kwakhona.
Kunye nokusetyenziswa kakhulu komoyaiingxowa zekholamukumashishini ahlukeneyo, abantu abaninzi ngakumbi baqaphela iingxowa zekholomu yomoya, kodwa kwinkqubo yokusetyenziswa baya kuhlangabezana neengxaki ezahlukeneyo.
Njengomenzi oqeqeshiweyo we-column column cushioning, sixoxa kwaye sabelane ngokusetyenziswa kweengxowa zekholomu yomoya kunye nemibandela ekufuneka iphawulwe kwinkqubo yokusetyenziswa.
1. Ukusetyenziswa kwenkqubo akuyi kuba nezixhobo ezibukhali zokugwaza, ii-blades kunye nemikrwelo yezikhonkwane.
2. Funa indawo ecocekileyo yokusebenza, ungasebenzisi ibhokisi yangaphandle enezikhonkwane, umqhubi akayi kushiya izikhonkwane, agqoke ubucwebe, akayi kutsalwa phantsi kweengxowa zomoya zokugaya kunye neminye imisebenzi engaqhelekanga.
La manqaku mabini angasentla ukuthintela ukuphuka komoyaiingxowa zekholamu, umonakalo obangelwa kukukhuselwa okungafanelekanga kwezinto.
3. Kufuneka ulumke xa ukhulula iipakethe zangaphandle, musa ukukrwela iingxowa ezinokuvutheka, zingaphinda zisetyenziswe okwesibini.
4. Kufuneka iqhutywe ngokuhambelana noxinzelelo olumiselweyo lokunyuka kwamaxabiso.
5. Ukusetyenziswa kweempompo zomoya kufuneka kuthathelwe ingqalelo ukuba ingaba ingxolo ihlangabezana neemfuno zokusingqongileyo ukuthintela ukungcoliseka kwengxolo okubangelwa ingxolo egqithisileyo.
6. Ukuba umgca wemveliso oqhubekayo we-inflatable, ukuqwalasela ukuba ukunikezelwa komoya kwanele, nokuba umpompo womoya unokuhlangabezana neemfuno zokusetyenziswa, ukukhusela i-inflatable encinci kwimpembelelo yamandla angaphandle, kunokubangela ukungqubana ngokuthe ngqo kwimveliso.